UCyndi Vanderheiden - Uhlaselo lwe-Speed ​​Freak Killers
UCyndi Vanderheiden wayehlala eClements, eCalifornia ngobomi bakhe bonke. Ukucoca i dolophu encinane eSithili saseSan Joaquin kwaye ngowama-1998, kwakukho abantu abangama-250. Kwakummandla oqinileyo apho abantu babesazi ukuba bafuna ukwazi ntoni ngabamelwane babo kwaye banceda bahlale bejongane.
I-Vanderheidens yayisondelene kwaye isondeza intsapho. Ebizwa ngokuba nguTigger ngentsapho yakhe, uCyndi wayenomdla kwaye enamandla, eyamnceda ukuba afumane indawo njenge-cheerleader esikolweni esiphakeme. Njengoko ekhulile, wabetha iindawo ezibuhlungu ebomini bakhe, kodwa izinto zahlanganisana kwaye ngo-1998, emva kokuba sele ehamba iminyaka engama-25, wayevuya.
Wayesebenza kwaye wayekwazi ukugcina imali eyaneleyo yokubeka phantsi emotweni entsha, kodwa wayenomthwalo wemali yamaphepha onke. Wagqiba ukuhlala ekhaya ade umsebenzi wakhe wesikhashana uhambe ixesha elipheleleyo. Yanceda ekunciphiseni uxinzelelo lwezezimali.
Umbulali weCyndi Vanderheiden
Kwaye ngoNovemba 14, 1998, xa uCyndi eyanyamalala . Ngaphambili ngaloo mini, wadibana nomama wakhe ngesidlo sasemini waza wenza intengiso encinane. UCyndi watshela unina ukuba ufuna ukuya ku-karaoke kwiLinden Inn, ibha elaliyi-Linden. Kwiveki nje ngaphambili, abazali bakhe bamlahlile umcimbi wokuzalwa wamangalisa apho. Iqela lalinomdla wokuhlabelela i-karaoke kunye ne-Cyndi yayinomdla wokuzonwabisa kwakhona.
Wabuza unina noyise ukuba bafuna ukuya naye, kodwa babesele bekhathele kakhulu, ngoko uKyndi kunye nomhlobo waya endaweni yoko. Okokuqala, baya kwelinye ibha uyise ayenayo kwiClements, ngoko washiya imoto yakhe apho waza wahamba nomngane wakhe kwi-bar yaseLinden Inn.
Kwakukho apho uCyndi waqala ukuthetha nabahlobo bakhe boodade , uWesley Shermantine noLeron Herzog . U-Herzog (uSlim njengoko wayemthiye) wayengazi mntu uLinden Inn okanye intsapho yaseVanderheiden. Enyanisweni, wayengumthengi othe rhoqo kwaye, ngezinye ixesha, wayenolwalamano olufutshane noodadewabo kaCyndi uKim.
UCyndi wayazi iShermantine ngakumbi ngegama, njengabantu bonke ababekuloo ndawo. Wayeyazi ukuba ungumhlobo omkhulu kaHerzog, kodwa wayesazi ukuba uphenywe emva kokuba intombazana ephakamileyo yaseStockton ilahleke, kwaye wayephindwe kabini ngokudlwengulwa . Kodwa akazange aphinde agwetywe naluphi na ulwaphulo - mthetho . Ngaphandle koko, u-Herzog wayehlala ekhusela yena nodadewabo uKim, ngoko kuyaqinisekileyo ukuba uCyndi wayekhathazekile kakhulu ngeShermantine.
Nge-2: 00 ekuseni, uCyndi kunye nomhlobo wakhe bashiya iLinden Inn, bahamba baza bathabatha imoto kaCyndi eClement, kwaye umhlobo wakhe walandela ikhaya likaCyndi. Njengoko uCyndi engena emgodini wakhe, umhlobo wakhe waphuma.
Ngentsasa ilanga unina kaCyndi, uTerri Vanderheiden, wayejonge ekamelweni lentombi yakhe kwaye wayevuyiswa ukubona ukuba wayenze umbhede wakhe. Akazange abone uCyndi, kodwa wayecinga ukuba sele esele aye emsebenzini.
Uyise kaCyndi uJohn Vanderheiden waphoswa nokubona intombi yakhe ngaloo ntsasa kwaye kamva wambiza emsebenzini ukuze abone ukuba wayenze ngendlela efanelekileyo. Waxelelwa ukuba wayengekhoyo kwaye akazange enze ukuba asebenze kulo lonke usuku. Iindaba ezichaphazelekayo uMnu. Vanderheiden kwaye waqala ukuhamba ngokujikeleza idolophu efuna indodakazi yakhe.
Kamva emini, uJohn wafumana imoto yakhe kaCyndi emiswe e-Glenview Emangcwabeni. Ngaphakathi kweemoto kwakukho isikhwama sakhe kunye nomnxeba, kodwa uCyndi wayengekho ndawo. Wayeyazi into ethile yayingalunganga kwaye wabiza amapolisa.
Ukukhangela okukhulu kwiCyndi
ILizwi lalihamba ngokukhawuleza kangangokuba uCyndi wayilahleka kwaye ngosuku olulandelayo abantu abangaphezu kwe-50 babonisa ukuba bamncede. Njengoko imini yajika yaba yiminyaka yenkxaso yaqhubeka kwaye abantu abavela kwiindawo ezikufutshane bahlangene ukuze bancede. Kwesinye isihlandlo kwakukho abantu abangaphezu kwe-1 000 abafuna iinduli, iibhanki zomlambo kunye nemigodi kunye ne-Clements.
Kwakhiwa isikhungo sokukhangela esagqithiselwa ekuhambeni kwindlu yaseVanderheiden. Udade omdala kaCyndi uKimberly wabuyela kwikhaya lomzali wakhe esuka e-Wyoming ukuze ancede ekukhangela kunye nendoda kwindawo yokukhangela.
Ngokunyaniseka kwintsapho kaCyndi, ukucwangciswa koCyndi kwaqhubeka kwaye ibali lakhe laba yiindaba zelizwe.
Uluhlu loPhando loPhezulu lweShermantine kunye noHerzog
Amapolisa aseSan Joaquin County of Police aphinde afune ngamandla uCyndi kuphela, kodwa kunye noChevelle Wheeler oneminyaka engu-16 ubudala owayesweleka ngo-1984.
Abaphandi babesazi ukuba uShermantine wayengumntu wokugqibela okubona uWarmeler ephila kwaye ngoku naye omnye wabantu bokugqibela ukubona uCyndi ephila.
UShermantine noHerzog babebe ngabahlobo ukususela ebuntwaneni baze bachitha ixesha labo lobomi ehlane laseCalifornia, behlola iinduli, imilambo kunye neenkcukacha zemizuzu emininzi eyenza iintaba. Abaphandi basebenzisa iiyure zokukhangela abantu kwiindawo eziyaziwa yiShermantine noHerzog, kodwa akukho nto yajika.
UShermantine noHerzog babanjwe ngo-Matshi 1999 ngenxa yokusola ukubulawa kukaChevy Wheeler. Imoto kaShermantine yayingeniswe, eyanika amapolisa ukuba ayifune. Igazi lafunyanwa ngaphakathi kweemoto kunye nokuhlolwa kwe-DNA kufana neCyndi Vanderheiden. UShermantine noHerzog bahlawuliswa ngokubulawa kukaCyndi, kunye nokubulala okunye okunye ukususela ngo-1984.
Xa abaphandi baqala ukuphanda u-Loren Herzog, waqala ukuthetha. Naluphi na ukunyaniseka ayekuyo kumhlobo wakhe osenyameni uShermantine wayesekho. Waxoxela abantu abaninzi ukubulala wathi uShermantine wenza, kuquka iinkcukacha zokubulala uCyndi.
"I-Slim yandinceda. I-Slim yenza into."
Ngokutsho kukaHerzog, ngobusuku uKyndi Vanderheiden wabulawa, uShermantine noCyndi babehamba kwi-bar ngaphambili kwantambama kwaye benze amalungiselelo okudibanisa kwiCamment yamangcwaba kamva ngaloo busuku noCyndi. Wathi wayefuna ezinye iziyobisi.
Ngokuqinisekileyo, abathathu badibanisa kwaye benza izidakamizwa kunye, ngoko uShermantine wabathabatha bonke "kwindwendwe yasendle" ngeendlela zangasemva. Ngokukhawuleza wadonsa ummese waza wafuna ukuba iVanderheiden enze isondo ngomlomo kuye. Emva koko wamisa imoto waza wadlwengula, wabuya, waza wambetha umqala kaCyndi.
Xa umceli wabuza uHerzog ukuba uCyndi wayethetha nantoni ngexesha losizi lwakhe, wathi ucele uShermantine ukuba angambulali aze amcele ukuba amncede. Ukubiza uHerzog ngegama lakhe lomnxeba elithi "Slim", amazwi akhe athi, "Uncinci uncedo kum. Wavuma ukuba akazange amncede aze ahlale esihlalweni sangasemva saloo moto waza wajika.
Abaphandi kunye neVanderheidens abazange bathenge ibali likaShermantine yenzeke. Ngesinye into, uCyndi wayefanele asebenze ngosuku olulandelayo emsebenzini ayewuthandayo kwaye wayezama ukunyuka kuwo. Akunakwenzeka ukuba uya kuhlala ubusuku bonke bekwenza i-methamphetamines. Kwakhona, kutheni ukuze ahambe ekhaya kuqala aze azenze ukutsala kwi-driveway kunokuya ngqo kwindawo edibeneyo yokuhlangana emva kokushiya ibha?
Kodwa kungakhathaliseki ukuba, amazwi kaHerzog ayenele ukuba abaphenyi bammangalele ngokubulala, kunye nencazelo yento eyenzeka kuCyndi kwimoto ehambelana nendawo apho kufunyanwa khona ubungqina begazi.
Wagwetywa kwaye Ugwetywa
UWesley Shermantine watholakala enetyala lokubulala u -Cyndi Vanderheiden, uChevelle Wheeler kunye nabanye ababini. Ubungqina be-DNA banele ngokwanelisekisa ijaji yecala lakhe, nangona izidumbu zikaCyndi kunye neChevelle zazingekho.
Ngethuba lokulingwa, uShermantine wenza isibonelelo sokushiya ulwazi malunga nalapho umzimba kaCyndi nabanye abathathu bangcwatyelwa ukuba batshintshe i-$ 20,000 efuna ukuba banikwe oonyana bakhe ababini. Kwakhona wanikezwa ithuba lokuxelela apho izidumbu zakhe zafunyanwa ukutshintshiselwa ukungatholi isigwebo sokufa. Akukho zigqibo ezenziwe.
Igosa likhuthaze isigwebo sokufa kuShermantine kunye nejaji lavuma.
Icala likaLonon Herzog laza emva koko wafunyanwa enetyala lezinto ezintathu zokubulala kunye nenani elilodwa lokufumana inxaxheba ekubulaleni. Wagwetywa iminyaka engama-78.
Ngomhla ka-Agasti 2004, ukuxhalaba kweentsapho zexhoba kunye nabemi baseSan Joaquin County, ukugwetywa kukaHerzog kwafakwa ngaphandle kwesibheno kwaye ngowama-2010, wadibana.
Kungekudala emva kokuba uCyndi alahleke, uJohn Vanderheiden wavala ibha yaseLinden Inn waza wahamba nayo, evumela ukuba umnini omtsha abe nantoni na ngaphakathi. Kwiminyaka, waqhubeka ekhangela iintaba kunye nemigodi ekukhangela intombi yakhe.
Unina kaCyndi u-Terri Vanderheiden, nangona emva kokuvuma kukaHerzog noShermantine, akazange ayeke ukukhangela indodakazi yakhe ehamba phantsi kweendlela kunye nezihlwele zabantu. Amaninzi kwiminyaka yonke, wayecinga ukuba ubona uCyndi, kodwa uyaqonda ukuba wayengafanelekanga. Akazange anike ithemba lokuba ngelinye ilanga wayeya kubona intombi yakhe iphila.
Udadewabo kaCyndi u-Kimberly waqhubeka nomntu kwiifowuni zokukhangela kwaye uncedise ukuhlela amaqela okukhangela iminyaka emva kokuba uCyndi alahleke. Kuya kuba yiminyaka elisithoba ngaphambi kokuba abuyele ebomini ayenayo ngaphambi kokuba uCyndi ahambe.
NgoJanuwari 2012, uLeron Herzog wazibulala ngexesha leeyure zokufunda ukuba iShermantine yayiza kuzisa imephu kubasemagunyeni kunye neendawo eziphawulwe apho abaninzi bexhoba lakhe bangcwatywa khona.
Ngasekupheleni kukaFebruwari 2012, uShermantine wabakhokela uphando kwindawo apho wathi uLonon Herzog wangcwaba amaninzi amaxhoba akhe. Ikhanga elinamazinyo lafunyanwa kwingcwaba elingafihlakeleyo kwintlambo kwipropati yeShermantine eyayibonakala yile yaCyndi Vanderheiden.
Intsapho yaseVanderheiden ithemba ukuba ngoku kufumanisa, ngoku banokufumana uhlobo oluthile lokuvalwa, nangona liza kuhlala lincinci.
Ngaba uAlbert DeSalvo wayengummangali waseBoston?
Izigwenxa zikaBrandy Holmes
I-Hilarious Museum I-Face Swaps Eyona Imisebenzi Yokwenene Yezobugcisa
Ukusebenzisana kwendawo ekuHanjeni naseMfuno
Admissions eDominican University
IMfazwe Yehlabathi I: Imfazwe yaseCambrai
Nepal | Iinkcukacha kunye neMbali
Yenza Ikhalenda Yakho Yesithombe
Imikhosi yeNyanga yeLifa leLifa leMveli
Ngaba iGolfers ikhethwa njani kwiDlalo ye-Ryder?
URajasaurus, iDinosaur oMdaka waseNdiya
I-African-American Dance Choreographers
Yonke into yokuba wazi ngaphambi kokuba uthenge ii-Acrylic Painting Supplies
Unyaka wokubala ukuya kutsho kuNyaka omtsha
Ixesha lokusebenzisa izibheno zesiLatini oko kukuthi umz
Umzabalazo omnyama weNkululeko
Okwenene okanye Inkohlakalo? Ividiyo ye-Obama yokuKhanda iViyo evulekile